Global Voices teny Malagasy » Mbola Mitoetra Ao Balkans Ny Nandikana ny Voambolana ‘Alien’ Telopolo Taona Sy Sarimihetsika Hafa Maro Tatỳ Aoriana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Mey 2017 5:52 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Bolgaria, Bosnia Herzegovina, Kosovo, Kroasia, Makedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia, Fiteny, Hevitra, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Zavakanto & Kolontsaina
Afisy lehibe ho an'ny sarimihetsika vaovao “Alien” ao Makedonia , mivaky hoe “Ilay Mpandeha Fahavalo: Dina. Hivoaka eny amin'ny trano fijerena sarimihetsika amin'ny 18 May. Efa afaka mividy tapakila.”
Nampirehitra indray ny adihevitra tranainy teo amin'ireo mpankafy ny hay-famoronana sy ny sarimihetsika ao Andrefan'i Balkans ny fanambarana fa tsy ho ela dia hivoaka eny amin'ny fijerena sarimihetsika ny andian-tantaran'ny “Alien” vaovao.
Rehefa nivoaka ny andian'ny sarimihetsika voalohany  tamin'ny taona 1979, raha tokony hampiasa ny teny izay midika hoe “olona vahiny”, na “extraterrestre” amin'ny fiteny ao an-toerana ny mpaninjara ao Yogoslavia, Hongria ary Polonina dia nisafidy ny handika ny lohateny hoe “Ilay Mpandeha Fahavalo ” izy ireo araka ny zava-misy fa ilay alien dia mpandeha an-tsokosoko tao anaty sambondanitra nitondra ekipa miisa fito .
Ny afisin'ny sarimihetsika tamin'ny taona 1979 amin'ny dikanteny Yugoslavy ôrizinaly misy fandikanteny Serba-Kroasiana sy ny lohateny ôrizinaly miaraka amin'ny fanamarihana “sarimihetsiky ny taona .” Mpanoratra tsy mitonon'anarana .
Noho izany lasa “Osmi putnik” amin'ny tenySerba, Kroaty ary Bosniaka ny “Alien”, “Osmi potnik” amin'ny Slovenianina, ary “Osmiot patnik” amin'ny Makedoniana.
Tsy izany avokoa anefa tao amin'ny firenena rehetra tao amin'ny faritra, na izany aza. Nampiasaina tamin'ny teny Albaney, Boligara, Tseky, Slovaky sy tamin'ny fiteny samihafa rehetra tao amin'ny Firaisana Sôvietika teo aloha ny fanovana tarehin-tsoratra na ny fahasamihafan'ny teny hoe “alien” ao an-toerana .
Nampiasa ny fitambaran'ny teny roa mifanakaiky ny lohateny Poloney “Obcy – ósmy pasażer Nostromo,”  ankoatra ny fanampiana ny anaran ‘ny sambondanitra any amin'ny farany ka niafara tamin'ny lohateny somary lava “Alien – Ilay Mpandeha Fahavalo Tao Anaty Nostromo.” Karazana mpandringana ihany koa ny lohateny Hongroà , “A nyolcadik utas: a Halál,”  izay midika hoe “Ilay Mpandeha Fahavalo : Fifanekena.”
Mbola notazomina hatrany manerana an’ Iogoslavia teo aloha ny “Ilay Mpandeha Fahavalo ” ary nampiasaina tamin'ny andian-tantara rehetra izay nivoaka tao anatin'ny 30 taona, anisan'izany ny fivoahan'ny “Alien: Covenant.”
Matetika , miverina any amin'ny adihevitry ny fandikanteny ny olona ao amin'ny faritra, na mihevitra izany ho fandikana foronina be loatra na manasokajy izany ho diso na lany andro.
Hita taratra ao amin'ny famaritana  ao amin'ny Vukajlija, rakibolan'ny tenin-jatovo Serba ao amin'ny aterineto izany . Sady ahitana fiderana no ahitana fanontaniana hoe “fa nahoana no tsy nisain'izy ireo ny saka?” ny teny hoe “Osmi putnik”, (nisy saka ihany koa tao anaty sambondanitra ankoatra ny ekipa mpandeha miisa fito izay toa hita fa tsy tafiditra tao anaty fanisana raha toa ka “ilay mpandeha fahavalo” tokoa ilay alien)
Tsy fahita firy amin'ny lohateny mety amin'ny sarimihetsika Ilay Mpandeha Fahavalo ao anivon'ireo fandikan-teny maro tsy mety sy ny fanazavana ny lohatenin'ny horonantsary vahiny amin'ny teny Serba.
Tezitra indray aho rehefa milaza izy ireo fa “mpandeha fahavalo” ny #Alien- O ry reto a! Nisy olombelona 6 tao, android iray , ilay saka, ary avy eo ny alien.
Avy eo nisy ny Alien na Osmi Putnik, izay adika ara-bakiteny hoe “Ilay Mpandeha Fahavalo “. Inona no nandikana ny tohiny? Ireo mpandeha hafa?:
Nizara ny fihetseham-pony mifanaritaka momba ny fandikantenin'ny lohateny ireo mpakafy tao Makedonia:
I cringe a lot when they write the Eighth Passenger instead of Alien on the cinema tickets. A lot!
Niahotra aho rehefa nahita Ilay Mpandeha Fahavalo teo amin'ny toeran'i Alien teo amin'ny tapakila. Tafahoatra!
Tsy miraharaha izay heverin'ny olon-kafa aho, lohateny miavaka ho an'ny sarimihetsika Ilay Mpandeha Fahavalo, tsara in-50 avo heny noho ny lohateny ôrizinaly .
Nisy fiantraikany teo amin'ny kolontsaina pop Yogoslavy any ivelan'ny tontolon'ny siansa famisavisana na hay-famoronana ilay sarimihetsika . “Osmi putnik ” no anaran'ny iray amin'ireo tarika heavy metal malaza tao amin'ny federasiona teo aloha, izay naorina tamin'ny taona 1985 tao Split, Kroasia. Mety nahatonga ny fandikanteny haharitra sy nankatoavina ny lazan'ity tarika ity. “Glasno, glasnije” (Ataovy mafy! Ataovy mafimafy kokoa!) ny iray amin'ireo hirany fantatra tsara indrindra.
Nampiasa ny andinin-tsoratra tao amin'ny sarimihetsika na dia ny adihevitra ara-politika aza. Nitanisa ny mpampianatra lalàna iray sady mpanao politika teo aloha Ljubomir Frčkoski  ny mpisera Twitter Makedoniana iray ary nampiasa ny “Ilay Mpandeha Fahavalo ” tamin'ny fomba manivaiva rehefa miresaka momba ny anjara asan'ny antokon'ny fitondrana izay manapotika ao amin'ny firenena taorian'ny fifidianana tamin'ny volana Desambra 2016;
” Toy ny hoe manana Mpandeha Fahavalo ao amin'ny sambofiaranao. Toy ny hoe manana alien ao amin'ny sambofiaranao ny mampiditra ny VMRO ao amin'ny governemanta”- Frchko.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/05/23/99968/
 sarimihetsika voalohany: https://en.wikipedia.org/wiki/Alien_(film)
 “Obcy – ósmy pasażer Nostromo,”: https://pl.wikipedia.org/wiki/Obcy_%E2%80%93_%C3%B3smy_pasa%C5%BCer_Nostromo
 May 10, 2017: https://twitter.com/mmarkicevic/status/862386031928147969
 Ljubomir Frčkoski: https://en.wikipedia.org/wiki/Ljubomir_Fr%C4%8Dkoski